ICara Cottage, kwiiNtaba zaseMorne - I-Airbnb
ICara Cottage, kwiiNtaba zaseMorne
ICara Cottage ikwindawo engaphandle kwelali yaseKilcoo kumbindi weMourne. Kwindawo ezolileyo epholileyo, kukho iimbono ezithatha umoya kunye nokufikelela ngokulula kwindlela yokuhamba kunye neebhayisekile ezikufutshane. Igumbi lokulala elinegumbi elinye elipholileyo elivalelweyo, lokulala abantu abadala aba-2 + abantwana aba-2 okanye abantu abadala abayi-4, le yindawo efanelekileyo yokuhlala yasemaphandleni yokuphumla okanye isiseko sokuhlola yonke into efumaneka kwindawo yendawo.
Sibekwe kwindawo efanelekileyo yokufikelela kwimisebenzi emininzi yangaphandle enokunikelwa ngabakwaMournes. Kwimizuzu elishumi yendlu encinci uya kufumana i-Game of Thrones yokufota i-Tollymore Forest, idolophu engaselwandle yaseNewcastle, ikhaya leRoyal County Down Course yeGalufa kunye noSlieve Donard, eyona ntaba iphakamileyo e-Ulster.
ICara Cottage inekhitshi yesicwangciso esivulekileyo sale mihla, indawo yokutyela kunye nendawo yokuhlala. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libandakanya indawo eninzi yokugcina kunye nendawo ephezulu, ifriji, i-oveni / ihob, imicrowave, itoaster, kunye neketile. Itafile yokutyela izihlalo ezi-4, kunye negumbi lokuhlala kunye neTV / iDVD isitofu se-fuel multi-fuel sikulungele ukuhlala emlilweni ngokuhlwa. Ke akufuneki ube nexhala, isibaso somlilo silungiselelwe wena- yonwabele!
Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa enokulungela abantu abadala/abantwana aba-2, kwaye igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini. Ibhedi yokuhamba iyafumaneka xa ifuneka, kunye nesitulo esiphakamileyo/i-booster seat.
Igumbi lokuhlambela linesuite epheleleyo, ebandakanya ibhafu kunye neshawa yombane eyahlukileyo kunye nesomisi seenwele. Ukuhlamba iimpahla, kukho indawo yokusetyenziswa kunye nokugcinwa, ukufikelela kwihashe lempahla okanye ngaphandle komgca wokomisa kunye nebhodi yentsimbi kunye ne-ayina.
ICara Cottage ikwicala / ngasemva kwikhaya losapho lwethu, ke kukho indawo yokupaka eyaneleyo ngaphambili, kunye nendawo eninzi kwingca ecaleni kwepikniki engceni okanye ukuba abantwana badlale ngokukhuselekileyo ngaphandle.
Eyona ndlela ilula yokuhamba ngemoto, kodwa iibhasi zidlula kwilali yaseKilcoo zisidibanisa neNewry City, Castlewellan, Newcastle ukuya phambili ukuya eBelfast. Ilali yaseKilcoo yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka eCara Cottage kwaye inevenkile enkulu encinci, indawo yokutya, isikhululo sepetroli, kunye necawa. Kukho ii-pubs ezimbini zasekhaya ezibonelela ngokutya zombini.
Inqaba yeCastlewellan ekufutshane, iLake, iPaki yehlathi, iArboretum kunye nendlela yebhayisekile ngokuqinisekileyo ikufanele ukutyelelwa, kwaye ungaphoswa yiPeace Maze, yenye yezona maze zeheji ezinkulu ezisisigxina emhlabeni.
Ukuba uceba ukujonga kude, iDownpatrick (indawo yokungcwaba iSaint Patrick) yimizuzu engama-20 yokuqhuba, iNewry City ikude nemizuzu engama-25, kwaye iDublin yiyure ezantsi kwendlela ukusuka apho. Ukuya eMantla, iBelfast yimizuzu engama-50 ngemoto ukusuka eCara Cottage.
Kufuphi nekhaya, ukuba ufumanisa okanye uphinda undwendwele iiNtaba zeMorne, sicebisa ngokobuqu iBrandy Pad emangalisayo, iHares Gap kunye neTrassey Track. Qhuba phambili kwaye uthathe iDama laseSpelga kunye neHilltown engummelwane, yimizuzu eli-10 kuphela ukusuka eKilcoo. Ukubhekisa phambili ukuya kwidolophu entle eselunxwemeni yaseRostrevor kunye neKilbroney Forest Park kwindawo entle kakhulu. Singacebisa ukuba silandele indlela yonxweme, sithatha iGreencastle's 13th Century Norman Castle, ulwandle oluhle lwesanti yaseCranfield kunye neKilkeel Harbour. Qhubeka ugudle unxweme udlula e-Ballymartin, e-Annalong kwaye ubuyele eNewcastle ukuze utye ngaphambi kokuba ugoduke ukuya eCara Cottage.
Kukho intabalala yokutya okumnandi kwakho, okufana ne-Kilcoo's Greenan's Steakhouse, kunye neMaginns Bar & Restaurant eCastlewellan, kunye neVilla Vinci, iVanilla, iGreat Jones ', kunye neBrunel's eNewcastle. Qiniseka ukuba uthatha iisampulu zokutya kwaselwandle okudumileyo kweMorne ngexesha lokuhlala kwakho eDundrum's Morne Seafood Bar nayo.
Le yindawo yasemaphandleni kunye noluntu olusondeleleneyo, kuninzi okufuneka kwenziwe kwindawo ejikelezileyo.
Hello and thanks for considering a visit to Cara Cottage, a child-friendly self-catering holiday accommodation. I am a mum of two young children, working locally and living next door to Cara Cottage with my husband. I've lived in the Mourne area all my life and it's a fantastic place to visit, with so many hidden local treasures so do let me know if you need any recommendations. The people here are some of the friendliest you'll come across anywhere in the world and we'll be happy to extend a very warm Mourne welcome to you.
Hello and thanks for considering a visit to Cara Cottage, a child-friendly self-catering holiday accommodation. I am a mum of two young children, working locally and living next do…
Sihlala emnyango kwaye siyavuya ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba asikho, ungafowuna, uthumele umyalezo okanye uthumele i-imeyile. Uya kuba nokusetyenziswa ngokupheleleyo kweCara Cottage ngexesha lokuhlala kwakho kwaye wamkelekile ukuba upake phambi kwendlu yangasese, sebenzisa umgca wokuhlamba ngasemva kunye nengca ecaleni nangasemva.
Sihlala emnyango kwaye siyavuya ukukunceda ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba asikho, ungafowuna, uthumele umyalezo okanye uthumele i-imeyile. Uya kuba nokusetyenziswa ngokupheleleyo…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kilcoo